Baro xeebaha ugu fiican Spain | Wararka Safarka
Xeebaha ugu fiican Spain
Susana Garcia | | Espana, General, Xeebaha
In kasta oo xilligii xeebta uu hadda dhammaanayo, runtu waxay tahay inaan mar walba dooneyno wax badan. Marka waxaan kuu sheegeynaa xeebaha ugu fiican Spain. Xaqiiqdii qaar baa maqnaan doona, maxaa yeelay Spain waxay leedahay xeelal badan oo kiilomitir ah iyo xeebo si ay nooga yaabiyaan. Kama daali doonno helitaanka aagag cusub oo bacaad leh iyo booqashada kuwa loo arko kuwa ugu fiican.
Dalkeenna waxaan ku leenahay xeeb aad u tiro badan, oo aan macno lahayn waa jasiirad, sidaas ay tahayna adag tahay in la kala doorto meelaha ugu badan ee bacaadka leh. Sida iska cad, qaar badan ayaa jira, laakiin waxaan ka hadlaynaa kuwa caanka ah. Xeebahaas waa inaan la seegin haddii aan booqano bulshada ay ku dhex nool yihiin.
1 Macarella iyo Macarelleta ee Jasiiradaha Balearic
2 Xeebta Bolonia ee Cádiz
3 Xeebta Genoveses, Cabo de Gata
4 Xeebta Rodas, Jasiiradaha Cíes
5 Xeebta Carnota, A Coruña
6 Xeebta Aamusnaanta, Asturias
7 Xeebta Cofete, Fuerteventura
Macarella iyo Macarelleta ee Jasiiradaha Balearic
Waxaan ku bilaabaynaa xeebo yaryar ama dhulal ku yaal Menorca. Waa in la yiraahdaa soo jiidashadoodu marwalba way jirtaa, laakiin waa bakhaarro aad u camiran inta lagu jiro xilliga xagaaga caannimadooda darteed iyo inaysan aad u weyneyn. Cala Macarella waa dhul ballaadhan oo bacaad leh lehna darbiyo dhagax ah labada dhinacba, sidaa darteed waa la ilaaliyaa. Biyaheeda nadiifka ah ee tones turquoise oo kugu martiqaadaya inaad dabaashaan waa shaki la'aan. Cove-kan waxaa sidoo kale ku yaal makhaayad baar ah oo ah adeegga kaliya. Cala Macarelleta waxaa loo tixgeliyaa inay tahay walaasha yar, halkaasoo qaawinta sidoo kale badanaa lagu sameeyo. Waxaa jira raad loo jaray isla dhagaxa ku soo biiraya labada xeebood, taas oo si weyn loogu taliyay.
Xeebta Bolonia ee Cádiz
Xeebta Bolonia, oo saacad u jirta magaalada Cádiz iyo labaatan daqiiqo oo u jirta Tarifa, waa mid ka mid ah xeebaha ugu caansan Spain oo dhan. Waa xeeb qurux badan oo ku taal qaab bilaha la qayb dhexe taas oo ku xigta goobta baabuurta la dhigto waana meesha aad inta badan ku aragto dad badan. Aagga waqooyi-galbeed waxaa ku yaal buun-weynaha weyn ee Bologna, taallo dabiici ah oo qurux badan. Sidoo kale ma seegi karno socodka alwaaxda leh kaymaha geedaha quruxda badan ee qaabeeya qaabkaas quruxda badan ee bikradda iyo xeebta dabiiciga ah. Meel u dhow waxaad sidoo kale booqan kartaa goobta qadiimiga ah ee Baelo Claudia. Waa goob qadiimiga ah laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad ee dhalashadii Ciise ka hor. by Caweyska Dalmar
Xeebta Genoveses, Cabo de Gata
Agagaarka baarkinka dabiiciga ah ee Cabo de Gata waxaan ka helnaa xeebta Genoveses, oo ah tan ugu wanaagsan. Waa biyo-mareen bikro ah, oo aan la gaadhin waddooyin ama dhismayaal, taas oo sii kordhisa soo jiidashadeeda Meel baabuur dhigasho ayaa u dhow laakiin markasta waa inaan xoogaa soconnaa. Waa xeeb bikro ah oo biyo mareen ah, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon maydhashada qoyska. Qaybta koonfureed ee gacanka waa Morrón de los Genoveses, buur leh aragtiyo qurux badan oo ku taal bartamaha San José.
Xeebta Rodas, Jasiiradaha Cíes
Tani waa xeeb aad caan u ah, sida caanka ahna jasiiradaha Cíes. Waa wax iska caadi ah catamarans inay yimaadaan sanad walba inta lagu jiro xagaaga dadka doonaya inay maalinta ama dhowr maalmood ku qaataan jasiiradda. Waa qayb ka mid ah Beerta Dabiiciga ah ee Jasiiradaha Atlantic waana aag la ilaaliyo. Ku jasiiradda waxay leedahay xero iyo adeegyo qaarkood, inkasta oo ay leedahay meelo aan la shaacin, dhowr wadiiqooyin lug ah iyo laydh. Playa de Rodas waa xeebteeda ugu weyn xagaagana waa dad aad u camiran. Ciideedu waa cadaan oo jilicsan yihiin biyihuna waa cad yihiin, taas oo ka dhigaysa in lala barbar dhigo xeebta Caribbean-ka, in kasta oo heer kulka biyaheeda inta badan qabow yahay.
Xeebta Carnota, A Coruña
Waxay ku taal magaalada Carnota waa xeebta quruxda badan ee Carnota. Gudaha Galicia waxaan ka helnaa xeebo badan oo qurux badan oo kuyaala meelaha dabiiciga ah ee cajiibka ah waana tan midkood. Waxaan ognahay inay biyaheeda qabow yihiin laakiin ay mudan tahay in la booqdo. Waxay ka badan tahay toddobo kiilomitir sidaa darteed ma dareemeyno inay dad badan yihiin ama ay ku jiraan xilli sare. Waxay leedahay aag qurux badan oo meelaheeda dhoobada ah lehna qiimo weyn oo xagga deegaanka ah. Shaki la'aan kani waa mid kamid ah xeebaha mudan in lagu arko Galicia.
Xeebta Aamusnaanta, Asturias
Asturias waxaan sidoo kale ka helnaa xeebo u qalanta. Ku Playa del Silencio waxay ku taal meel u dhow magaalada Cudillero waana xeeb leh xayndaab gaar ah. Helitaankeedu aad uma fiicna, xitaa haddii aan baabuur raacno, maadaama ay leedahay hal waddo oo leh dhinac baabuurta la dhigto qaar ka mid ah. Xeebta waxay u egtahay qolof waxaana ku xeeran buuro taagan. Waxaa jira aragti laga qaado sawirro qurux badan ka dibna waxaad u dhaadhacaysaa xeebta. Waa xeeb bikro ah oo aan lahayn adeegyo maadaama ay tahay aag la ilaaliyo.
Xeebta Cofete, Fuerteventura
Jasiiradda Fuerteventura, ee degmada Pájara, waa xeebta Cofete. Waxay ku jirtaa xaalad bikro ah maxaa yeelay waa inaad uga soo maraa waddooyin aan la saarin. Sidoo kale ma jiraan adeegyo dalxiis laakiin tani waa waxa ka dhigaya mid gaar ah. Hayso 14 km kiilo mitir ah, markaa waa wax cajiiba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Espana » Xeebaha ugu fiican Spain
Duomo ee Florence
Maxaa lagu arkaa Kuuriyada Koonfureed